चक्रवृद्धि ब्याज नियम के हो ? कति वर्ष हुन्छ तपाइँको पैसा डबल ? Bizshala -
काठमाण्डौ । यदि तौल कम गर्न चाहनुहुन्छ भने थोरै खानुहुन्छ अनि धेरै व्यायाम गर्नुहुन्छ। पैसाको मामिलामा पनि यस्तो नियम लागू हुन्छ। खर्च कम गर्नुहोस् र धेरै बचत गर्नुहोस्। यो नियमले तपाइँको वित्तीय स्वास्थ्य दरिलो बन्छ।